बैज्ञानिकले १ मिनेटमा ३ लिटर उत्पादन गर्ने सस्तो अक्सिजन कन्सनट्रेटर बनाए « Sansar News -->
बैज्ञानिकले १ मिनेटमा ३ लिटर उत्पादन गर्ने सस्तो अक्सिजन कन्सनट्रेटर बनाए
१५ बैशाख २०७८, बुधबार ०९:५२
सन्सारन्युज । बैज्ञानिकहरुले १ मिनेटमा ३ लिटर सम्म उत्पादन क्षमता भएको सस्तो अक्सिजन कन्सनट्रेटरको निर्माण गरेका छन् । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्चका ४ संकाय सदस्यहरुले सो मेशिनको निर्माण गरेका हुन् । सो मेशिनको नाम अक्सिकान नाम दिइएको छ ।
यो मेशिनको मुल्य बजारमा पाइने अक्सिजन कन्सनट्रेटरको मुल्य भन्दा ३० देखि ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने छ । यो मेशिनले हावाबाट प्रत्यक्ष रुपमा ९३ प्रतिशत अक्सिजन निर्माण गर्ने क्षमता राख्दछ । अक्सिकान मेशिनको कम्पनी खोल्नको लागि इन्सिटच्युटले सरकार र विभिन्न निजी कम्पनीहरुसँग सल्लाह गरिरहेको छ । बैज्ञानिकहरुले सो मेशिन निर्माणको लागि विगत ३ महिनादेखि काम गरिरहेका थिए ।
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर एवं कम्प्युटर साइन्स विभागका सहाएक प्रोफेसर डा. मित्रादेव भट्टाचार्य, डा. सुजित पेड्डा र डा. सांतुन तालुकदार साथै केमिकल इन्जिनियरिङ विभागका डा. वेकंटेश राव रिसर्च समुहमा सहभागी भएका थिए । बैज्ञानिकहरुका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरमा सो अक्सिजन मेशिन छिट्टै उत्पादन गर्न सकिएमा लाखौं अक्सिजन चाहिने कोरोना विमारीहरुलाई राहत मिल्न सक्छ ।
यो मेशिन निर्माणमा जियोलाइट सामाग्रीको उपयोग गरिएको छ । दुई जियोलाइट कोलममा समयको वर्णक्रम मिलाइएको छ । जसले वैकल्पिक रुपमा काम गर्न सक्छ । बैज्ञानिक भट्टाचार्यका अनुसार मेशिनमा टाइम टाइम सिक्वेन्स माइक्रो प्रोसेसर सर्किटको विकास गरिएको छ ।
हेटौंडामा ‘डिजिटल बागमती संवाद’ आयोजना हुँदै
स्थापनाको ४५ वर्षमा पञ्जिकरणको महा–अभियान
जिमेल भरिएर हैरानीमा हुनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् खाली
पाँच महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्व
एनसेलले ल्यायो गज्जबको डेलि जीबी प्रयोगकर्ताका लागि क्यास…
यसरी गर्नुहोस् राष्ट्रिय परिचय–पत्रको लागि अनलाइन अवेदन